FAQs - Nzou Fluid Power Co, Ltd.
Hydraulic Inotungamira Valve
Hydraulic Piston Pump Spare Zvikamu
Hydraulic Vane Pump Uye Spare Zvikamu
Rexroth Pump Zvikamu
Mitengo yedu inochinjika zvichienderana nekuwanikwa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Isu tichakutumira iwe yakagadziriswa mutengo rondedzero mushure mekambani yako taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Semuenzaniso, nguva yekutungamira inenge mazuva manomwe. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzekutungamira dzinova dzinoshanda kana (1) tawana dhipoziti yako, uye (2) isu tiine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana edu ekutungamira nguva asingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugovera zvaunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kuzviita.
Chii chinonzi chigadzirwa?
Isu tine waranti yemidziyo yedu uye basa rekugadzira. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune garandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando yekutengesa kunze. Isu tinoshandisawo hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine ngozi uye yakasimbiswa inotonhorera yekuchengetedza vafambi kune tembiricha inonzwika zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kupinza imwezve muripo.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express kazhinji ndiyo inokurumidza kupfuura asi zvakare inodhura nzira. Nekufamba kwegungwa ndiyo mhinduro yakanakisa yemari hombe. Mitengo yekutakura chaiyo tinogona kungokupa kana isu tichiziva iwo huwandu hwehuremu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.